Unique-homogeneous terrazzo taịl
Ịbịaru n'ike mmụọ nsọ si omenala terrazzo na Italy na tụnyere ejiji ọcha na oge a na mmepụta technology na pụrụ iche niile na-ahụ site na nkà na ụzụ, imewe na arụmọrụ nke omenala terrazzo e ukwuu mma. The pụrụ iche ngwaahịa mmasi nke terrazzo rejuvenates na mode ...
Gịnị mere anyị kwesịrị iji soft polished tile?
E nwere onye na nchoputa ẹkenịmde n'etiti 200 home mma na-emepụta na 80 agadi ezigbo ala na ụlọ ndị nwe banyere isiokwu - gịnị ka ha na-eche nke honed okokụre tile. 80% of interviewees mma a ọhụrụ na-emekarị. Dị ka ụzọ ha na-ahụ ya, elu kenkowaputa tilesmight akpata oké visual mmalite whi ...
Gịnị bụ a larịị oge a seramiiki tile?